Saraakiil Soomaali iyo Ajaaniib baaritaano ku sameyneysa weerarkii lagu qaaday Hotelka S.Y.L”Dhageyso” |
Saraakiil Soomaali iyo Ajaaniib baaritaano ku sameyneysa weerarkii lagu qaaday Hotelka S.Y.L”Dhageyso”
Saraakiisha Ciidamada Dowladda Somaliya iyo Saraakiil kaloo Ajaaniib ah, ayaa waxay iska kaashanayaan baaritaanada lagu sameynaayo, cidii ka dambeysay iyo kuwii kale ee gacanta ka geystay, weerarkii ismiidaaminta ahaa ee shalay lagu qaaday Hotelka S.Y.L, oo ku yaala meel ku dhow Madaxtooyada Somaliya.
Madaxweynaha Somaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo Khamiistii shalay tagey S.Y.L Hotel, ka dib weerarii ismiidaaminta ahaa ee lagu qaaday, ayaa wuxuu sheegay inay soconayaan baaritaano ku aadan, isla-markaana ay baaritaanadu wadaan Saraakiisha Dowladda iyo kuwo kaloo uu ku sheegay inay saxibo yihiin.
Madaxweynaha, ayaa sheegaaya in khuburadaan looga fadhiyo inay ka soo turxaan bixiyaan weerarka ka dhanka ah Hotelka S.Y.L, si masuuliyadana ay u qaadato cidii ka dambeysay, sida uu hadalka u dhigay.
Madaxweynaha waxa uu soo hadalqaaday ammaanka Magaalada Muqdisho, isagoona balanqaaday inay la sii xoojin doono, ilaa iyo inta ay Dowladdu la joogto martida, oo uu kala jeedo wefdiga Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdoğan.
Dhanka kale Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa wuxuu shacabka reer Muqdisho uu ka codsaday inaanay dhib u arkin wadooyinka la xir xiray, si ammaanka loogu xoojiyo, mudada ay booqashada ku jooggaan wefdiga reer Turkish.
Madaxweynaha wuxuu bulshada ka codsaday inay la shaqeeyaan Ciidamada Dowladda Somaliya, iyadoo laga duulaayo xaqiijinta ammaanka Magaalada Caasimada ah ee Muqdisho.